567 bhp နဲ့ အတူ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Range Rover Sport SVR Ultimate Edition အသစ်! – MyMedia Myanmar
567 bhp နဲ့ အတူ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Range Rover Sport SVR Ultimate Edition အသစ်!
Land Rover အနေနဲ့ ကတော့ သူတို့ရဲ့ ကားတွေထဲကနေ ခပ်ကြမ်းကြမ်းစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ကားကောင်းတစ်စီးကို ချပြလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဆိုပါကားကတော့ 567 bhp ရှိတဲ့ Range Rover Sport SVR ဖြစ်ပြီး တော့ Ultimate Edition လို့တော့ နာမည်ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ SUV အသစ်ကိုတော့ အခုလာမယ့် စက်တင်ဘာလ ထဲမှာပဲ Blenheim Palace မှာရှိတဲ့ Salon Privé က ကုမ္ပဏီ ရဲ့ကားသစ်တွေ ပြသနေကျနေရာမှာ စတင် မိတ်ဆက်တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားသစ်ကိုတော့ Juguar Land Rover ရဲ့ Special Vehicle Operations ( SVO ) ဌာနကနေ တာဝန်ယူ ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်းအရလည်း ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာခဲ့သလို မော်ဒယ် ၃ မျိုးစာ သီးသန့်အရောင်တွေအနေနဲ့လည်း ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ SUV အသစ်အတွက် တစ်ခါတည်း အော်ဒါမှာယူနိုင်နေပြီဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းကတော့ £123,900 လောက်က စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Standard Range Rover Sport SVR အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်လာတဲ့ အခုကားသစ်မှာတော့ ၂၂ လက်မအရွယ် Forged Alloy ဘီးတွေ တပ်ဆင်ပေးလာတာ တွေ့ရပြီး အနက်ရောင် ဘရိတ် Caliper တွေနဲ့ အတူ Carbon-Fiber Bonnet ဖုံးလည်း ပါဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် နဲ့ အပြင်ပိုင်း က အရောင်တွေ တောက်ပြောင်နေစေမယ့် ဒီဇိုင်း အပြင် အဆင်ကတော့ Gloss Black Replacement လုပ်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Land Rover ရဲ့ အရောင်သစ်တွေထဲမှာတော့ Maya Blue Gloss နဲ့ Marl Grey Gloss ဆိုပြီး နှစ်ရောင် ထူးထူးခြားခြား ပါဝင်လာပါတယ်။ အဆိုပါ နှစ်ရောင်စလုံးမှာသာမန် Base-Coat အရောင် အပြင် အပေါ်ကနေ ရောင်ပြန် Glass Flake အမှုန်လေးတွေပါ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ နည်းပညာကြောင့် ပိုတောက်ပ နေမှာပါ။ Land Rover ရဲ့ အဆိုအရတော့ ကြယ်ကလေးတွေ တောက်ပနေမယ့် ကားတစ်စီးရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံရိပ်လို့ တင်စားထားတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ နောက်ထပ် ရွေးချယ်စရာ တတိယမြောက် တစ်မျိုးကတော့ Satin-Black Finish ဖြစ်ပြီးတော့အရောင်တိုင်းရဲ့ ကားအမိုးကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဆွဲဆောင် မှုရှိ‌စေမယ့် အနက်ရောင်ပဲ ပါဝင် လာတာပါ။
ဒီဇိုင်းပိုင်းအရ ပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ ကားအတွင်းခန်း အထိဆက်လက် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အနက်ရောင် သတ္တု Paddle Shifters တွေအပြင် Model အလိုက် ခွဲခြားပေးထားတဲ့ Illuminated Tread Plates တွေကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် သာမန် ထက် ပိုမိုထူးခြားတဲ့ Chrome SV Bespoke တံဆိပ်တွေကိုလည်း B-Pillars တွေ အပေါ်မှာ တပ်ဆင်ပေးထားပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် အတော်လေး ပေါ့ပါးတဲ့ SUV တံဆိပ် Sports ထိုင်ခုံတွေ လည်း ထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပြီး သားရေ သားနဲ့ Faux-Suede Upholstery တွေကို ပေါင်းစပ် ပေးထားတာ ကတော့ တကယ်ကို ကြည့်လို့ ကောင်းနေ‌ စေတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် Standard Range Rover Sport SVR လိုပဲ အခု Ultimate Edition မှာ ဆိုရင်လည်း Supercharged 5.0 Liter V 8 Engine ကိုပဲ တပ်ဆင် ပေး ထားမှာ ဖြစ်ပြီး 567 bhp နဲ့ 700 Nm Torque အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်မှာပါ။ Land Rover ရဲ့ အဆိုအရတော့ ၄.၅ စက္ကန့် လောက် အတွင်း မှာတင် တစ်နာရီ ၀ ကနေ ၆၂ မိုင် လောက်အထိ အရှိန်တင်မောင်းနှင်နိုင်မှာ ဖြစ်ကာ အမြင့်ဆုံး မြန်နှုန်းကတော့ တစ်နာရီကို ၁၇၆ မိုင် အထိ ရှိလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အင်ဂျင်ကိုမှ Eight-Speed Automatic Gearbox နဲ့တွဲဖက်ထည့်သွင်း ပေးလာမှာဖြစ်ပြီး Four-Wheel Drive စနစ်အနေနဲ့ ပွဲထွက်လာတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post 567 bhp နဲ့ အတူ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Range Rover Sport SVR Ultimate Edition အသစ်! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-08-25T14:00:29+06:30August 25th, 2021|MYCARS MYANMAR|
ယာဉ်မောင်းခုံကိုပါ ခေါက်လို့ ရနိုင်မယ့် 2022 Hyundai Casper အသစ် !
ဘေးဘောင် အထူကြီးတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ 2022 Subaru WRX Base Model ရဲ့ Infotainment Screen !
ဆောင်းရာသီထက် နောက်မကျ နိုင်တော့မယ့် Hyundai Ioniq5အသစ် !
တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ပထမဆုံးသော Rivian R1T Truck ကား!
စိတ်မချရသေးတဲ့ Tesla ရဲ့ မောင်းသူမဲ့စနစ် Update အသစ် !
All-Wheel Drive အပြင် ဒီဇိုင်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေနဲ့ တွေ့မြင်လာရပြီဖြစ်တဲ့ Mazda CX-5 !
ဂျာမနီ မှာလဲ နောက်နှစ်ထဲ မောင်းသူမဲ့ တက္ကစီတွေ လာတော့မည် !
ဗြိတိန်မှာ နေအိမ်အသစ် တွေတိုင်း လျှပ်စစ်ကား အားသွင်းပေါက်တွေ တပ်ဆင်ဖို့ ရှိနေ!
မီးစွဲ လောင်နိုင်မယ့် ပြဿနာတစ်ခု ရှိနေတဲ့ Toyota Tundra ရဲ့ Headlight!
ကိုယ်တိုင်ပဲ သီးသန့် တည်ဆောက်လာတော့မယ် ဆိုပြန်တဲ့ Apple Car !
မကြာမှီ လာမည်မျှော်ရမယ့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး Ford Explorer !